Igumbi lokuziphekela kwindawo ekhethekileyo yeSiqithi - I-Airbnb
Igumbi lokuziphekela kwindawo ekhethekileyo yeSiqithi
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguDennis
I-New Horries ime kwimpuma ye-Orkney Mainland (iSiqithi esikhulu), malunga neekhilomitha ezili-12 ukusuka e-KIrkwall, kwi-parish yase-Deerness, ephantse ibe siSiqithi esifikelelekayo ngendlela yendalo (evulekileyo unyaka wonke) phakathi kwentlanganiso yaseMantla. Ulwandle kunye noLwandlekazi oluMantla lweAtlantiki ukuya emazantsi kunye neDeer Sound ukuya emantla. Ipropathi - i-amalgam yeNdawo, yanamhlanje, umgangatho ophantsi obekwe endulini, kunye ne-Norwegian yendabuko- kwaye yayilwa yaza yakhiwa ngabanini, yagqitywa ngo-2011.
Le ndlu ibonelela ngemibono emangalisayo ngasentshona kwiinduli zeHoy kunye neWest Mainland kwaye emantla ukuya kwiziqithi eziMantla zeziqithi.
Le ndlu inomgangatho ophantsi wepropathi (ngaphandle kwegaraji) enesango labucala (elinezibuko lemoto elidityanisiweyo) elinika, ngeveranda, kwikhitshi elibanzi / isidlo sangokuhlwa / igumbi lokuhlala- elinezixhobo zokuzityisa kunye ne-wi-fi. . Kukho indawo ekwabelwana ngayo (kunye nomnini) into eluncedo kunye nempahla yokuhlamba/yokomisa kumgangatho ophantsi. Indawo eshiyekileyo ine-paseji enamagumbi amabini okulala amabini, igumbi lokuhlambela elikhulu kunye negumbi lokugcina. Ikliphu yevidiyo iyafumaneka ukuba unxibelelana nomamkeli.
4.86 · Izimvo eziyi-100
I-Deerness ibonelela ngokuzola okuza nokuba sisiqithi esiphantse sibe siSiqithi kodwa ngenzuzo yokufikelela iiyure ezingama-24 kuyo yonke i-Orkney mainland ngendlela edityanisiweyo ngaphaya kwendlela yendalo. I-New Horries ikwiikhilomitha ezi-2 ukusuka kwi-Gloup-indawo ekhethekileyo yolwandle kunxweme olusempuma. Kufuphi, isiqingatha semayile kude kukho ifama eyonwabisayo, evuleleke kuluntu ngexesha lasentwasahlobo nasehlotyeni kunye neAlpacas, iihagu ezinqabileyo, iibhokhwe, iinkukhu, kunye negumbi leti ukuhlaziya abatyeleli. I-Gin distillery emalunga ne-1 1\_2 yeemayile kude nayo ivulelwe iindwendwe, inevenkile kunye nekhefi. Ukusuka kwiNew Horries kukho iingoma kunye neendlela ezolileyo zokuhamba okanye ukujikeleza yonke iDeerness. Kukho iilwandle ezi-4 onokukhetha kuzo, enye yazo yimizuzu emi-5 nje yokuhamba. Njengakuzo zonke iindawo ezolileyo, ubomi basendle buxhaphakile. Siziikhilomitha ezili-12 ukusuka kwidolophu enkulu (kanjalo ineCathedral sisiXeko ngokwenene!) saseKirkwall esineevenkile, nazo zonke izibonelelo.
Abanini bahlala kumgangatho ophezulu kwaye baya kufumaneka ukuba bakubulise, kodwa kungenjalo uya kunikwa iinkcukacha zendlela yokusifumana isitshixo. Ababuki zindwendwe banolwazi olubanzi lwe-Orkney kunye nembali yendalo kunye nenkcubeko abaya kuvuya ngakumbi ukwabelana nabo, ukuba baceliwe. Ababuki zindwendwe bagcina amahashe ama-3 kunye nezinja ezi-2 ezinobubele, ngoko ke ziyakuvumela iindwendwe ukuba zize nezinja eziziphethe kakuhle nezilawulwayo ukuba azingeni kwindawo ezikhaphethiweyo (igumbi lokulala). Indawo ejikelezileyo ngumhlaba wokufama ngoko ke izinja kufuneka zigcinwe zikwintambo ngamaxesha onke.
Abanini bahlala kumgangatho ophezulu kwaye baya kufumaneka ukuba bakubulise, kodwa kungenjalo uya kunikwa iinkcukacha zendlela yokusifumana isitshixo. Ababuki zindwendwe banolwazi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Orkney